A iphupho indoda kuyindlela ukubuyisela amandla ngokomzimba nangokwengqondo. Ngaphezu kwalokho, esebenzayo ngesikhathi sokulala kuka ngesikhathi sihlale siphapheme, iqala enganakile yethu. Ngalesi sikhathi, thina intuitively usebenzisa izinhlamvu uthole tinkhomba izifiso bebodwa, izinkinga nezisombululo zazo.
Ngakho, enye ezivamile izimpawu iphupho ziwashwa. Kungakhathaliseki ukuthi kufanele ugeze izinwele zakho ngephupho noma nje ukuthatha okugeza, kubalulekile Kuyaphawuleka wokugeza. Lokhu, kusukela iphuzu Ngenxa cishe yonke iphupho-izincwadi, noma kunjalo, kusho inkululeko, ukuhlanzwa konke engadingekile futhi kube nzima. Umzimba wakho nomphefumulo unganakile ufuna umthwalo womuzwa okungadingekile izinkinga, ubuhlobo ecasulayo noma ukuzinikela. Ngakho-ke, umzimba kuzinga enganakile Usebenzisa aphansi uhlanzekile indlela njengoba egeza.
Ikakhulukazi abalulekile kule ndaba izikhathi lapho kufanele ugeze izinwele zakho ngephupho. Njengoba inhloko lifanekisela konke kunengqondo, okunengqondo futhi enengqondo kumuntu, siwasebenzise nalo lonke omubi kuhlale incazelo lalibe nesiqalo esihle. Ngakho-ke, cishe sonke amaphupho walolu hlobo - a hle bika etshengisa ukuletha izindaba zakhe ukuze. Ngo "encwadini iphupho Modern" kusho ukuthi ikhanda ukugeza ephusheni kusho ukunikeza ngokwabo impumelelo futhi sikufisela inhlanhla kwezamabhizinisi. Ngomqondo onabile, kuveze ezinjalo kungenziwa ngokuthi enengqondo futhi elungile, ngoba isifiso ukuxhuma ingqondo ukuze baxazulule izinkinga zabo futhi ezindabeni noma kunjalo ukuqinisekisa kokuphothula uhlelo.
Caveat kuphela liwuphawu uthingo njengoba nokuchazwa izinhlamvu yesibili: amanzi lapho ugeza, futhi emizweni elihlobene ne egeza.
Iqiniso liwukuthi uma uzizwa ukungakhululeki lapho ziwashwa, khona-ke kusho ukungakhululeki efanayo nenkathazo empilweni yangempela kanti ukususa inkinga. Ngokwesibonelo, abanye abantu, ubani ngibona iphupho efanayo, ugeze izinwele zami kwaba ezingemnandi: imoto noma babancwebe amehlo izinyembezi, futhi kwakuyinto engenakwenzeka ukuthola basuse ukungcola kusukela izinwele noma ugeza ngokwayo iphutha endaweni engafanele. Kunoma yikuphi, abantu bazizwe kuphatheke kabuhlungu kakhulu. Ngokuvamile lokhu umuzwa kusekelwe amaqiniso angempela enganakile. Siyaqaphela ukuthi ukuqeda into kuyoba nzima kakhulu, futhi kuyodingeka zidlule nehlazo, ukuhlazeka noma impahla izindleko.
Umbuzo obaluleke nakakhulu liwuphawu nendlela ozibonakalisa ngayo amanzi kufanele wageza ngephupho.
Uma amanzi kucacile futhi efudumele, kuyilapho ukususa ezimbi kuzokwenzeka kahle futhi uyoletha inhlanhla futhi injabulo ezinhle. Ngemva iphupho enjalo uzizwa bejabule, fresh futhi eyingqabavu, njengoba uma wayesanda lakhishwa ibandla elingcwele amanzi wefonti. iphupho enjalo - bika omkhulu, okuhunyushwa nangokunembile njengoba isilinganiselo izenzakalo ezijabulisayo.
Uma inhloko ukugeza ephusheni owawunalo amanzi angcolile, khona-ke kufanele bakulungele imizwa ezingemnandi futhi bonke ubunzima. Isifiso khulula umthwalo izinkinga singase sibe namandla kakhulu, kodwa ngisho ngaphezulu izimo ekuvimbeleni ukwenza okulungile. Noma kunjalo, ngisho iphupho sinjalo imbewu omuhle njengoba amasignali owukhethile efanele. Ngakho-ke, emva kokuthi uvukile, xhuma wonke amathuba yangempela kanye engqondweni ukusiza enganakile yakho.
Njengoba icishe izimo ezifanayo esingesihle lapho kufanele ahlanze izingubo ngephupho. Ekuphileni okungokoqobo, asisoze oyofika engqondweni ukwenza bahlanye ezinjalo. Ngakho-ke, iphupho esinjalo kubonisa izenzakalo ezingezinhle ezingaphakama, ngenxa esinganikela ngawo incur ukulahlekelwa noma ushonelwa othandekayo ku abangelwe ubuwula bakhe.